Nta kacha nta n'ụwa | Akụkọ Njem
Vatican City bụ otu n'ime microstates ole na ole dị na Europe ugbu a ma dị na Rome, isi obodo Italy. E kwupụtara nnwere onwe nke Holy See site na mba agbata obi ya na February 1929 site na Lateran Pacts. A maara ya n'ụwa niile maka ịbụ ebe akwara Katọlik etiti.
O nwere mpaghara nke 0,44 km2 na ókèala ya pere mpe nke na naanị St. Peter's Basilica nwere 7% nke elu ya. O nwere ihe ruru narị mmadụ asatọ bi na ya. Pope bu onye isi ala na obodo pere mpe nke uwa ka ndi mmadu bi, ndi ndu Switzerland, ndi Cardinal, ndi nchu aja na onye isi ya.
Ekwuputara nnwere onwe nke Holy See site na ontali na February 11, 1929 site na Lateran Pacts. Na Vatican City enwere njem nleta ato nke n’acha n’onwe ha: St. Peter’s Square, St. Peter’s Basilica na Vatican Museums, ebe Sistine Chapel di.
2 Ogige St. Peter
3 Lọ ngosi ihe mgbe ochie nke Vatican
4 Ndụmọdụ maka ileta Vatican City
5 Uwe ejiji
St. Peter’s Basilica bụ ụlọ okpukpe kachasị mkpa na Katọlik. N'ime ya, Pope na-eme emume mmemme kacha mkpa ma ime ya na-anabata Holy See. Abanye basilica bụ ịrụ ụka adịghị otu n'ime ndị kasị kwesịrị ncheta ahụmahụ nke a nleta Rome.
Aha ya sitere na pope mbụ n’akụkọ ihe mere eme, Saint Peter, onye liri ozu ya n’ụlọ nsọ. Ihe owuwu ya malitere na 1506 wee kwụsị na 1626 na ndị na-ese ụkpụrụ ụlọ dị iche iche sonyere na ya, n'etiti nke anyị nwere ike ịkọwapụta Bramante ma ọ bụ Miguel Ángel.
N'ime ya nwere ikike maka mmadụ 20.000. N'ime ọrụ nka a na-ahụ n'ime mgbidi ya bụ Baldachin nke Bernini, nke Michelangelo's La Piedad na akpụrụ akpụ nke Saint Peter n'ocheeze ya.
Otu n'ime ihe na-adọta mmasị nke basilica bụ nnukwu dome dị egwu nke rụworo ọrụ dị ka mmụọ nsọ maka ọrụ ndị ọzọ, dị ka Katidral St. Paul na London ma ọ bụ Capitol na Washington.
Enwere ike ịnweta dome iji nwee mmasị na Plaza de San Pedro site n'elu ma ọ bụrụ na ụbọchị ahụ doro anya mana ọ bụghị ọrụ maka ndị niile na-ege ntị ebe akụkụ ikpeazụ na-eme site na steepụ dị warara dị warara nke nwere ike ịba ụba nye ụfọdụ ndị.
Ogige St. Peter
Ebe a bụ otu n'ime ihe kachasị mma n'ụwa ma basilica ọ na-etinye 20% nke ókèala nke Vatican City. Ọ bụ Bernini wuru ya n’etiti narị afọ nke iri na asaa ma nwee ike ịnabata ihe karịrị mmadụ 300.000 maka akwụkwọ na nnukwu ihe omume.
Na mgbakwunye na nke ya (mita 320 n’ogologo na mita 240 n’obosara), ihe na-adọrọ mmasị banyere akụkụ anọ ahụ bụ ogidi 284 na pilasters 88 ndị kwụ n’ama ahụ n’otu ụzọ ụzọ anọ. Emebere ya site na 1656 na 1667 site n'aka Bernini, site na nkwado nke Pope Alexander VII.
N’etiti square ahụ, obelisk na isi iyi abụọ ahụ pụtara, otu Bernini (1675) na nke ọzọ Maderno (1614). E wetara obelisk dị elu dị mita 25 na Rom site na Egypt na 1586.
Lọ ngosi ihe mgbe ochie nke Vatican
Vatican Museum na mba kacha nta n'ụwa nwere ọtụtụ puku ọrụ nka ndị Chọọchị Roman Katọlik chịkọtara kemgbe ihe karịrị narị afọ ise.
Ebe mmalite nke ụlọ ndebe ihe ochie ndị a bidoro na 1503, mgbe Pope Julius nke Abụọ bidoro ọfụma ma nye onyinye nchịkọta ihe osise nke onwe ya. Site n'oge a, ndị popu ndị na-esote na ezinụlọ dị iche iche nke onwe ha nyere onyinye ma mụbaa nchịkọta ahụ ruo mgbe ọ ghọrọ otu n'ime ndị kasị ibu n'ụwa.
N'ime Museumlọ Ndebe Ihe Ochie nke Vatican bụ Sistine Chapel, nke a maara maka ọmarịcha mma ya na maka ịbụ oghere a na-ahọpụta popu ọzọ. A rụrụ ya n'oge iwu nke Pope Sixtus nke Anọ, onye aha ya sitere na ya. Offọdụ ndị nka dị mkpa nke rụrụ ọrụ na ya bụ Miguel Ángel, Botticelli, Perugino ma ọ bụ Luca.
Ndụmọdụ maka ileta Vatican City
Tụlee ịnara metro dị ka ụzọ njem njem ma ịla na Vatican City.
Ebe iri nri n'akụkụ ọnụ ụzọ ụlọ ụka Peter's Basilica na-adịkarị ọnụ ma anaghị atụ aro ya nke ukwuu. N'ihi nke a, anyị na-akwado gị ka ị gakwuru ndị nọ na Via Germanico na Via Marcantonio Colonna.
Vatican Museums na Sistine Chapel na-efu ihe dị ka euro 17 na Dome nke St. Peter na-efu ihe dị ka euro 8. St. Peter’s Basilica na St. Peter’s Square dị n’efu.
Tinye akwụkwọ ntuziaka ka ị gaa na Vatican Museum na akụkụ ndị ọzọ nke Vatican City. Thiszọ a ị na-ejide n'aka na ị ga-ahụ ihe niile.
Obodo Vatican karịrị obodo a ga-eji, ọ bụ ebe a na-ekpe ekpere ebe Vatican n’onwe ya nwere koodu ejiji ya. Ọ bụrụ na ịmara ya, ebe anyị na-agwa gị:
Ejiri uwe kpuchie ikpere na ubu niile. Ọ bụrụ na ekpuchighị ebe ndị a, ha nwere ike jụ gị mgbe ị banyere n’obodo. N'ihi nke a, anaghị anabata aka elu, sundress, na nịịka. Womenmụ nwanyị nwere ike idozi nke a site n'itinye ihe mkpuchi n'akụkụ akụkụ ubu ma ọ bụ iyi uwe ma ọ bụ leggings n'okpuru uwe ogologo ma ọ bụ obere uwe.
Yiri akpụkpọ ụkwụ dị mma ma dịkwa mma. Ọ bụ ezie na obodo ahụ pere mpe, ị ga-aga ije wee chere n’ahịrị dị ogologo iji banye ụfọdụ saịtị (basilicas, museums, church, etc.).
Ejila nnukwu akpa ma ọ bụ akpa gaa na saịtị ndị ahụ, ebe ọ bụ na a na-enyochakarị ha. Ọ bụrụ n’ịchọghị ka akwụsịtụ gị ebe niile ebe a na-enyocha ndị mmadụ, obere ihe ị na-ebu, ka mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Mba kacha nta n'ụwa